Abacre Maareynta alaabada iyo Control - Main Page
Abacre Maareynta alaabada iyo Control
Gaaraan buuxda gacanta maamulka tan soo socota jiilka Tirin oo gacanta ku!
Download maxkamad version 30-maalin buuxda-ciyaaray ( 6.15 MB)
Top 10 sababo in la iibsado Abacre Maareynta alaabada iyo Control
Shaqeeyaa si fiican on Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / Windows 7/8.
Abacre Maareynta alaabada iyo Control waa jiil cusub oo software inventory ee Windows. Waxay khusaysaa dhammaan hawlgalada ka amar, biil, wax iibsiga, iyo tirsiga qaadashada maaraynta shaqada. Interface user ayaa waxaa si taxadar leh filaayo in aqbasho xawaaraha sare ee si macmiilka ah iyo ka hortagga qaladaad caadi ah. Waxaa loogu talagalay isticmaalaya on kombiyuutarada badan, oo ka kooban heer lagu kalsoonaan karo oo ammaan oggolaansho.
Waxa ay taageertaa hababka xisaabinta Tirin ugu caansan: LIFO, FIFO iyo Average. Alaabta Sales ka mid noqon kara alaabada iyo agabka kala duwan sida qaybood.
Waxaa la shaqeeyaa dhammaan qalabka caadi ahaan loo isticmaalaa: shaashadaha taabashada, daabacado POS, line soo bandhigay (ulo), gura lacag caddaan ah iyo akhristayaasha barcode (scanners code bar). The Layouts biilka uu macaamilka laga beddeli karaa, iyo barnaamijka la samaysan karta wixii lacagaha, canshuuraha, iyo qaabab tiro. Lacagta ay aqbali karto lacag caddaan ah, kaararka amaahda, ama jeeg.
Wixii maamulayaasha, waxaa jira set qani ku ah warar sheegaya in ay muujinaysaa sawir buuxa oo alaabada iyo iibka hawlgallada: on Tirin gacanta, faaidada, iibka by muddo la siiyo, saacadood ee Xamuulka sare, Z-Out, shaqaalaha hababka ugu firfircoon, bixinta, iyo xisaabinta canshuurta automatic.
By standardizing maareynta alaabada iyo control-socodka oo dhan, software wuxuu sameeyaa si fiican loo isticmaalo shaqaalahaaga 'waqti iyo tamar xad dhaaf ah u qaado bedbedelka iyo faa'iido xadad.
Way fududahay in la rakibo iyo fududahay in la isticmaalo. Aad liisan la awoodi u ogolaataa software taasi oo lagu isticmaalo deegaanka wax yar oo hal-computer dukaamada tafaariiqda in silsilado tafaariiqda badan oo la surimmada magalka badan ka.
English , Afrikaans , Albanian , Arabic , Armenian , Azerbaijan , Basque , Belarus , Bengali , Bosnian , Bulgaria , Catalan , Somali , Chinese (Fudud) , Chinese (Traditional) , Croatia , Czech , Danish , Dutch , Isberento , Istooni , Filipino , Finland , Faransiiska , Galician , Joorjiya , German , Greek , Gujarati , Creole Haitian , Hausa , Hebrew , Hindi , Hmong , Hungary , Ayslandhiik , Igbo , Indonesian , Irish , Talyaaniga , Japanese , Jafaaniis , Kannada , Khmer , Kuuriya , Lao , Laatfiyaan , Lithuania , Makedoniya , Malay , Malta , Maori , Maarati , Mongoliyaan , Nepali , Norwegian , Persian , Polish , Portuguese , Punjabi , Romanian , Russia , Serbian , Slovak , Slovenia , Somali , Spain , Sawaaxiliga , Swedish , Tamil , Telugu , Thai , Turkiga , Ukraine , Urdu , Vietnamese , Welsh , Yadhish , Yoruba , Zulu
Maxaa qof ayaa ku yidhi:
"Sannado aan isticmaalo mid nidaam POS makhaayad MS-DOS ilaa aan ugu dambayntii helay badal wanaagsan Windows-ku salaysan: Abacre Point Restaurant ee Sale. Waxaan u marka la barbar dhigo barnaamijyo kale oo badan oo aan joojiyay on artpos, sababtoo ah waxa ay si fiican loo sameeyo iyo sidoo-hoodu. Sidaas awgeed, waxaan soo iibsaday kormeerayaasha screen taabashada, kombiyuutarada cusub iyo artpos. Isbedelka ka nidaamkii hore MS-DOS nidaamka cusub ee Windows-ku salaysan ahaa yaab leh: in artpos aan u isticmaalno images alaabta menu ee navigation si degdeg ah, war cajiib ah oo barnaamijka laftiisa waa wax configurable iyo anfac leh. Tan iyo waqti in aan ahay taageere kama dambaysta ah ee artpos oo aan ku talinaynaa in aan saaxiibo ganacsiga. "
Home | Products | Downloads | Order | Taageero